Sayec oo u dabaaldegtay guulihii ay gaartay
Posted by shiikha on 09/09/2017 00:49:27
Ururkan oo ah mid ka shaqeeya una adeega dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, gaar ahaan isboortiga kubadda cagta, ayaa u dabaaldegay guulihii ay ka gaareen tartamada cayaaraha ee ka socda gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalka Maraykanka.
Haddaba xaflad lagu soo dhaweynayay guushii dhawaan ay ka soo hooyeen tartamadii cayaaraha kubadda cagta ee under 16 ayaa lagu qabtay Dugsi Academy, iyada oo ay xafladdaasi ka soo qaybgaleen mas’uuliyiin Isboorti, macallimiin iyo waalidiintii caruurta dhashay.
Ugu horreyntii waxaa halkaasi warbixin ka soo jeediyay Abdirizak Said (Marshaale) iyo Abdirahman Guled (Aamaan) oo labaduba ka mid ahaan jiray barisamaadkii halyeeyadii kubadda cagta Soomaaliyeed, haatana u xuub siibtay inay soo saaraan oo tababaraan jiilka cusub ee soo koraya, waxaana ay yihiin raggii bud dhigga u ahaa aasaaskii naadigan kubadda cagta ee la magac baxay Sayec.(Somali American Youth Enrichment club) .
Waxaa ay ka warbixiyeen waxqabadkii ururkan iyo guulihii ay kooxda U 16 ka soo hooyeen tartanka gobolka Minnesota, waxaana ay si weyn ugu mahadceliyeen waalidiinta iyagu har iyo habeen taageerada la garab taagan ururkan, macallimiinta gacanta ku haysa kooxaha kala duwan ee naadigan uu leeyahay , iyo ka soo qayb galayaasha xafladda.
Sidoo kale waxaa halkaasi erayo mahadnaq iyo guubaabo isuga jira halkaasi ka soo jeediyay , Abdi Yusuf oo ah masuul ka tirsan guddiga Olimbikada Somalia iyo xiriirka cayaaraha fudud, Macallin Qaridi iyo macallin Shiikha.
Gunaanadkii Xafladda waxaa halkaasi hadiyado iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay cayaartooydii guulaha ka soo hooyay tartanka iyo kuwii horumarka ku tallaabsaday.